Maalin: Janaayo 8, 2020
1. Bishii hore qandaraaska loo yaqaan Konya Rail Nidaamka metro Metro iyo Gaadiidka metro waxaa la siiyay shirkadda CRRC ee Shiinaha 1.2 milyan Euro (7 bilyan 900 milyan oo TL). Sanadkii la soo dhaafay ee Istanbul 272 [More ...]
Golaha guud ee gobolka ee shirkii labaad ee 2020 Gudoomiyaha Salih Ayhan iyo Duqa magaalada Sivas Hilmi Bilgin ayaa ka soo qaybgalay. Ayhan iyo Bilgin waxay ku soo ururiyeen arimo badan Sivas [More ...]
Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Ordu Mehmet Hilmi Guler, degmada Kabaduz ee Çambaşı Plateau ayaa lagu dhisay baaritaanadii laga helay bungalows. Dhagaxyada, oo dhowaan laga furay Çambaşı Plateau, waxay awood u yeesheen inay ka fogaadaan walaaca magaalada. [More ...]
Hawlaha ayaa laga fuliyay wadooyinka isku xidha Barta Baraha Bulshada Ecevit Bridge, oo ay dhistay Dawlada Hoose ee Magaalada Manisa ee Salihli. Kurtuluş Kuruçay, Madaxa Dhismaha Wadooyinka iyo Dayactirka ee Dowlada Hoose ee Manisa [More ...]
Iyada oo la kaashanayo Dawladda Hoose ee Gaziantep, Rugta Wadayaasha iyo Gawaarida, ayaa markii ugu horreysay lagu gaadhay baaxadda leh Gaadiidka 'Smart Transportation'. “Smart Taxi la Fatma Şahin, Duqa Magaalada Caasimadda, alitynal Akdoğan, Guddoomiyaha Rugta Darawalada iyo Gawaarida [More ...]
Muwaadiniintu waxay si weyn u muujinayaan xiisaha SAKBİS Smart Baaskiilka Nidaamka kaas oo ay hirgaliso Dawladda Hoose ee Magaalada Sakarya. Isugeyn 15 macmiil SAKBİS ah, oo laga aasaasay qaybo kala duwan oo magaalada ah kana shaqeeya 8 goobood [More ...]
Duqa Degmooyinka Magaalada Kayseri Memduh Büyükkılıç, sida dhammaan meelaha gaadiidka si loo bixiyo adeeg tayo aad ufiican ka wanaagsan, ayay yiraahdeen iskudayaan. Duqa magaalada Büyükkılıç ayaa sidaa yidhi [More ...]
Mashruucyada wadooyinka tareenka ee Erzincan-Gumushane-Trabzon ee sii wadaya hirgelinta xubinta Golaha Dawladda Hoose ee Magaalada Trabzon iyo Member Trabzon-Erzincan Railway Platform Saban Bulbul, ayaa sheegay in qandaraaska dhismaha la dhameystiri doono kadib hirgelinta mashruuca qandaraaska. Nightingale, "Dib [More ...]